मानिस ठुलो के ले हुन्छ? - Blogs of Sagar Prasai
मानिस ठुलो के ले हुन्छ?
मेरो साथीले मलाई एउटा कथा सुनाए।
उनले भर्खरै एउटा घर किनेछन्। घर पुजा मात्रै गरेर सर्नुपर्ने पहिला देखी चलिआएको रित उनलाई पनि पुरा गर्न मन लागेछ। पुजा गर्न पण्डित जी चाहियो। उनले आफ्ना साथीहरूको सहयोगमा एकजना पण्डित जी को नम्बर पत्ता लगाएछन्। अनि पण्डित जी सँग फोनमा कुराकानी भएछ। पण्डितजीले पुजाका लागी चाहिने सबै सर सामाग्रीको सुची दिएछन् र भोलि भेट्ने बाचा गरेर फोन राख्नु अघि सोधेछन्- "अनि साँच्चि बाबुको नाम चाहि के भन्नुभयो।"
मेरो साथीले भनेछन्-"मेरो नाम "फलानो" परियार!"
त्यसपछि फोन को कुराकानी टुङ्गिएछ। तर त्यसको केहि छिन पछि; पण्डित जीले आफै फोन गरेर भन्नुभएछ-" बाबु, अघि भुसुक्क बिर्सिएछ भोलि दिउँसो त मेरो अर्कै काम छ। अघि आउँछु भनि हाले बाबु, अब यसो अरु नै पण्डित खोज्नु है।" यति भनेर उनले फोन राखेछन्।
एकै छिन अगाडी त्यति उत्साहित भएर पुजा गर्न तम्सिएका पण्डित बाजे ले एकैछिनमा- त्यसतो कुरा गरे पछि मेरो साथी छक्क परेछन्। उनले कुरा टुङ्ग्याउँदै गर्दा मलाई भने- " खोई किन गुरुले त्यसो भने। सायद मेरो थर सुनेर होला।"
उनले हाँस्दै भने।
म हाँसिन। हाँस्न सकिन।
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भने जस्तो; यो शहरमा मानिस ठुलो दिलले हुदैन रहेछ क्यार। जातले नै हुने रहेछ क्यार। यदि मानिस ठूलो दिलले हुने भएको भए आफु अपमानित भएको कथा मनमा एक निमेषको द्वेष पनि नराखि सुनाउन सक्ने मेरो दिलदार साथीले देशको राजधानीमा आफ्नो पैसाले बनाएको घरको पुजा गर्न पण्डित खोज्न हार गुहार गर्नुपर्दैन थियो!